डेंगु नियन्त्रणमा चासो - Pradesh Today डेंगु नियन्त्रणमा चासो - Pradesh Today
भदौ २४, २०७६ जीतसागर जी.एम.
जोखिम क्षेत्रको पहिचान
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, दाङ
दाङमा अहिलेसम्म करिब दशजनामा डेंगुको संक्रमण देखिएको छ तर संक्रमित व्यक्तिमध्ये अधिकांश उपचार गरेर निको भइसकेका छन् । केही व्यक्तिहरु मात्रै उपचारका लागि भारतसम्म पुगेको खबर पाएका छौँ ।
जिल्लामा डेंगुको संक्रमण देखिएपछि हामीले उच्च सतर्कताका साथ डेंगु नियन्त्रणका लागि प्रयास थालेका छौँ । अहिलेका नयाँ संरचना अनुसार दाङका दशवटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य शाखामार्फत डेंगु नियन्त्रणका लागि अभ्यासहरु थालिएका छन् ।
जिल्लामा अहिलेसम्म घोराही उपमहानगरपालिका, तुलसीपुर उपमहागरपालिका, बबई गाउँपालिका लगायतका स्थानीय तहमा बढी जोखिम देखिएको छ । अहिले डेंगुका बिरामी देखिएका पनि यी स्थानीय तहमा नै हो ।
जोखिमका हिसाब यि तीन स्थानीय तह बढी जोखिम देखिए पनि दाङका सबै क्षेत्र अलि बढी जोखिम देखिन्छन् । डेंगुको महामारी फैलिन सक्ने क्षेत्र भनेको ग्रामीणभन्दा सहरी ईलाका अझ बढी जोखिम देखिन्छ ।
फेरी यो भन्दैमा गाउँमा सचेत हुनुपर्ने अवस्था नभएको होइन् गाउँ पनि जोखिम नै मानिन्छ । डेंगु सार्ने लामखुट्टे अरु लामखुट्टेभन्दा फरक नै हुन्छ ।
एडिस नामक पोथी लामखुट्टे भनेको अहिले बढी सफा क्षेत्रमा बस्ने गरेको पाइन्छ । त्यसकारण पनि अरु लामखुट्टेको तुलनामा यो जातको लामखुट्टे सहरी क्षेत्रमा बढी पाइने हुँदा जोखिमका हिसाबले सहरी क्षेत्र अलि बढी छ ।
२०/३० डिग्री मौसममा बस्ने यो लामखुट्टेको नियन्त्रणका लागि अहिले गाउँ, टोलको सरसफाई नै प्रभावकारी देखिन्छ । जिल्लामा पछिल्लो समय बिरामीको संख्या थपिन थालेपछि महामारीका रुपमा फैलिने होकी भन्ने चिन्ता पनि छ तर त्यसो हुन नदिनका लागि हामीले विभिन्न पक्षका सरोकारवालासँग सर्कुलर गरिरहेका छौँ ।
सबैभन्दा हामी स्वयम् नागरिक पनि यो रोगबाट ग्रसित हुनबाट बच्नका लागि समयमै सचेत बन्नुपर्ने अवस्था छ भने सरकारी तवरबाट पनि हामी जिम्मेवार निकायका नागरिकले पनि सचेतना फैलाउनु आवश्यक छ । डेंगु लागिसक्यो भने निको नहुने भन्ने हुँदैन् तर समयमै उपचार चाहिँ पक्कै गर्नुपर्छ ।
डेंगुको लक्षण र बच्ने उपाय
डा. नारायण ज्ञवाली
डेंगु एक प्रकारको ज्वरो हो । यो लामखुट्टेको टोकाईबाट सर्ने संक्रामक रोग हो । डेंगुको भाइरसद्वारा संक्रमित भएको एडिस एजिप्टाई जातको पोथी लामखुट्टेले यो रोग सार्दछ । यो रोग सार्ने लामखुट्टे ग्रामीण क्षेत्रभन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी पाइने गर्दछ । य
सले स–साना सफा पानी जमेको स्थानमा फुल पार्ने गर्दछ । खासगरी वर्षाको पानी जम्ने टीनका डब्बाहरू, रंगका खाली डब्बा, थोत्रो टायर, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, फुलदानी, गमला, पानीका ट्याङ्की आदिमा यसले फुल पार्दछ । सहरी क्षेत्रमा यस्ता वस्तुहरू पर्याप्त मात्रामा हुने भएकाले पनि यो लामखुट्टे सहरमा बढी देखिएको बताए ।
डेंगु एडिस एजेप्टाई र एडिस एल्वौपेक्टस नामक लामखुट्टेले टोकेर हुने तीब्र भाइरल संक्रमण हो । यो भाइरस डेंगु १, डेंगु २, डेंगु ३ र डेंगु ४ गरी चार प्रकारका हुन्छन् । एडिज लामखुट्टे कालो रंगको हुन्छ, जसमा सेतो थोप्लो पनि देखिन्छ ।
यो लामखुट्टेले विशेषगरी दिउँसो टोक्ने गर्दछ । औलो उत्पन्न गर्ने लामुखट्टे फोहर पानीमा पाइने भए पनि डेंगु सार्ने लामखुट्टेले थुप्रै दिनदेखि हलचल नभएको स्वच्छ पानीमा फुल पार्छ । डेंगु रोग क्लासिक डेंगु, हेमोरेजिक र साक सिन्ड्रोम गरी तीन प्रकारका छन् ।
क्लासिक डेंगु सामान्य प्रकारको डेंगु हो । यो आफै निको हुन्छ, मृत्युको सम्भावना कम हुन्छ । तर यदि कुनै व्यक्तिलाई डेंगु हेमोरेजिक ज्वरो वा डेंगु साक सिन्ड्रोम भएको छ भने यसको उचित प्रकारले उपचार नगरे मृत्यु हुन सक्छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा यसको लक्षण अनुसार उपचार गरिन्छ । ज्वरो घटाउन सिटामोल खानुपर्छ तथा प्रशस्त झोल पदार्थ खानुपर्छ । तर ज्वरो घटाउने भनेर एस्पीरीन तथा आईबुप्रोफेन भने खान हुँदैन ।
डेंगु ज्वरोविरुद्धको खोप तथा खास उपचारसमेत नभएको हुँदा लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु नै यस रोगको बचावटको मुख्य उपाय हो । डेंगु ज्वरोको शंका लागेमा हुनसक्ने जटिलताबाट बचाउन तत्काल नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नुपर्छ । डेंगु ज्वरोको मुख्य लक्षण भनेको एक्कासी उच्च ज्वरो आउनु हो ।
यो ज्वरो ५ देखि ७ दिनसम्म रहन सक्छ । ज्वरोका साथै असाध्यै टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी तथा आँखाको पछिल्लो भाग दुख्ने, ढाड, जोर्नी तथा मांसपेशीहरू दुख्ने, शरीरमा बिमिरा आउने, वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, नाक वा गिजाबाट रगत बग्ने, रक्तश्राव हुने वा शरीरमा रगत जमेको दागहरू देखापर्ने, बेहोस हुने आदि लक्षणहरू पनि देखापर्न सक्छ ।
डेंगु ज्वरोबाट बच्न लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नुका साथै लामखुट्टेको वृद्धि रोक्नुपर्छ । पानी जम्न सक्ने भाँडाहरू जस्तै गमला, फुलदानी, खाली बट्टा, अलकत्रा वा मट्टितेलका खाली ड्रमहरू, गाडीका काम नलाग्ने टायरहरू आदिमा पानी जम्न नदिने र पानीको ट्याङ्कीलाई लामखुट्टे प्रवेश गर्न नदिने गरी छोपेर राख्ने, कुलरमा रहेको पानीमा प्रत्येक हप्ता एक दुई चम्चा मट्टितेल हालिदिने साथै जम्मा भएको पानी सफा गर्ने,
फुलदानीमा रहेको पानी हप्तामा दुई पटक फेर्ने, यस लामखुट्टेले दिउँसो टोक्ने हुँदा दिउँसो बस्दा बाहुला भएको वा शरीर ढाकिने लुगा लगाउनुपर्छ । सम्भव भएसम्म दिउँसो सुत्दा पनि झुल प्रयोग गर्नुपर्छ ।
साथै साना केटाकेटीलाई जुनसुकै समयमा पनि झुलभित्र सुताउनु पर्दछ । लमखुट्टेको टोकाइबाट बच्न लामखुट्टे भगाउने मलहम दल्न पनि सकिन्छ । घरका झ्याल, ढोकामा जाली लगाउनु उपयुक्त हुन्छ । घर वरिपरि सफा सुग्घर राख्ने, पानी जम्ने खाल्डाखुल्डी पुर्ने गर्नुपर्छ ।
वडाको वार्षिक समीक्षा तथा आगामी कार्यक्रम
बढ्यो सिकाइ उपलब्धि